नेपाली बीएचएम विश्वबजारमा | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा नेपाली बीएचएम विश्वबजारमा
नेपालमा ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेण्ट (बीएचएम)को पढाइ शुरू भएको १३ वर्ष भयो । यो छोटो समयमै नेपाली विद्यार्थीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘हस्पिटालिटीमा नेपालीहरू नै योग्य’ भन्ने छाप पार्न सफल भएका छन् । ‘अतिथि देवो भव’बाट हाम्रो संस्कार प्रेरित भएकाले अतिथि सत्कारमा हाम्रो सफलता चुलिएको हो । नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट (नाथम)का बीएचएम संयोजक सूर्यकिरण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसारकै ठूला भनिएका होटलका म्यानेजरहरू नै हाम्रा विद्यार्थी खाज्दै आउन थालेका छन् ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली विद्यार्थीको माग बढ्दै गएको छ । खाडी मुलुकका ठूला चेन होटलहरू मात्र होइन, जापान र क्यानडाबाट पनि नेपालीका लागि धरै नै माग आउन थालेका छन् । यूरोपेली मुलुक र अमेरिकामा पनि नेपाली बीएचएमहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । रिज हस्पिटालिटी म्यानेजमेण्ट कलेजका प्रिन्सिपल विकास श्रेष्ठले १ महीनाअघि मात्रै भारतको ताजमहल होटलका एक जना प्रबन्धकले आफूलाई फोन गरी बीएचएम उत्तीर्ण विद्यार्थी पठाइदिन अनुरोध गरेको जानकारी दिए ।
हँसिलो मुहार, आत्मैदेखि खुलेर सत्कार गर्ने बानी र इमानदारीका कारण नेपालीको पहिचान विश्वबजारमा बेग्लै किसिमले स्थापित हुँदै छ । आकर्षक कमाइ र तुलनात्मक रूपमा सजिलो पेशा भएकाले नेपालमा पनि बीएचएम अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । ‘अरूको सम्मान गर्दा इज्जतदार जिन्दगी पाइन्छ,’ नाथमका एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘यो नेपालको पर्यटन विकास गर्ने महइभ्वपूर्ण कडी पनि हो ।’ कमाइ र सन्तुष्टि दुवै हिसाबले राम्रो भएकाले यो विषय अध्ययन गरेको उनले बताए । नेपालकै आन्तरिक बजारमा पनि होटल उद्योगको भविष्य चुलिँदै गएपछि बीएचएमप्रतिको विद्यार्थी लगाव अझ तीव्र बनेको छ ।
स्वदेशी ठूला होटलले बीएचएम पढेकालाई अवसर दिन थालेका छन् । स्वदेश र विदेश सबैतिर उज्ज्वल भविष्य देखेका विद्यार्थीहरू होटल म्यानेजमेण्टमा आकर्षित भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्राडा. पुरुषोत्तम शर्माले बताए । यस विषयका विद्यार्थीले होटल व्यवसायमा अतिथिको स्वागत– सत्कारसँगै विभिन्न देशका स्वादिला परिकार बनाउन सिक्ने गर्छन् । बीएचएम अध्ययन गरेका विद्यार्थीबाट होटल क्षेत्रलाई नयाँ आयाम दिई पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने बीएचएम अध्यापन गराइरहेका कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौंको गोल्डेनगेट इण्टरनेशनल कलेजमा बीएचएम अध्ययनरत हिमाल खड्का अध्ययनपछि स्वदेशमै केही गर्ने बताउँछन् । ‘यो विषयको अध्ययन पूरा गरिसकेका विद्यार्थी विदेश जान आवश्यक छैन,’ उनले भने । नेपाल पर्यटकको आकर्षक केन्द्रबिन्दु भएकाले स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ । त्यसैले, स्वदेशमै केही गरेमा देशको आर्थिक वृद्धिमा महइभ्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ ।
कसरी शुरू भयो नेपालमा बीएचएम ?
विसं २००७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि ने पालमा विदेशीहरूको आवागमन बढ्न थाल्यो । जनताले पनि व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । विदेशी अतिथिहरूको आवगमन बढ्दै गएपछि होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसाय पनि फस्टाउँदै आयो । एकपछि अर्का गर्दै होटल तथा रेष्टुराँको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा आतिथ्य सत्कार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव महसूस हुन थाल्यो । तर, देशभित्र आतिथ्य सत्कारका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । भारतलगायत छिमेकी देशबाट यससम्बन्धी जनशक्ति झिकाएर अभाव परिपूर्ति गरियो । विस्तारै पर्यटनलाई ने पालीहरूले व्यवसायका रूपमा अघि बढाउन थालेका थिए । त्यसपछि पर्यटनको विकासका लागि नेपाली आफैले आतिथ्य (हस्पिटालिटी) शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने महसूस गरे ।
आतिथ्य व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न सरकारले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ को सहयोगमा होटल म्यानेजमेण्ट एण्ड टुरिजम ट्रेनिङ सेण्टर (एचएमटीटीसी)को स्थापना गर्‍यो । यो सन् १९७२ को कुरा हो । पछि सन् १९९९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत होटल म्यानेजमेण्ट विषयलाई समावेश गरेपछि एचएमटीटीसीलाई नै नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट (नाथम)मा परिणत गरियो । यो नै नेपालको पर्यटनसम्बन्धी पढाइ हुने एक मात्र सरकारी स्वामित्वको कलेज हो । नाथमले पहिलोपटक बीएचएमको पढाइ सञ्चालन गर्‍यो ।